Myanmar Facebook Users များနဲ့ Unicode Font System - Eureka Myanmar |
Home Featured Font LocalNews Myanmar News TechNews Technology Unicode Zawgyi Myanmar Facebook Users များနဲ့ Unicode Font System
Featured Font LocalNews Myanmar News TechNews Technology Unicode Zawgyi
Myanmar Facebook Users များနဲ့ Unicode Font System
Thura Soe August 24, 2018 0
Facebook က Myanmar Font အနေနဲ့ Myanmar Unicode ကို တရားဝင် အသုံးပြုသွားပြီး Zawgyi Font ကို တဖြည်းဖြည်း ဖြုတ်ချသွားမှာ ဖြစ်တယ် ဆိုတဲ့ သတင်းကို သြဂုတ်လ (၁၅) ရက်နေ့က Facecbook Newsroom မှာ ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အရေးကိစ္စတွေအတွက် Facebook ပေါ်မှာ သတင်းတုနဲ့ hatespeech တွေကို လျှော့ချဖို့ ရည်ရွယ်ပြီး သီးသန့် product ဖန်တီးဖို့ ကြိုးစားခဲ့ Facebook ဟာ သူတို့ ရရှိလာခဲ့တဲ့ အဖြေရှာနည်းကို ဝေမျှခဲ့တာပါ။
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ Facebook user တွေအကြားက Facebook ရဲ့ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေနဲ့ ကိုက်ညီမှုမရှိတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို Flag လုပ်နိုင်ဖို့အတွက် နည်းပညာအရရော လူအင်အားကိုပါ ရင်းနှီးခဲ့ရာက 2018 ဒုတိယ ၃လပတ်မှာ hatespeech အဖြစ် ဖယ်ရှားခဲ့တဲ့ အကြောင်းအရာတွေထဲက 52% ဟာ ကြိုတင်သိရှိခဲ့တာကြောင့်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒါ့အပြင် မကောင်းတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို report လွယ်လွယ်ကူကူ လုပ်နိုင်ဖို့အတွက် ကြိုးစားတဲ့ နေရာမှာ မြန်မာစာ display ဟာ အကြီးဆုံး အခက်အခဲဖြစ်ခဲ့ပြီး Unicode ကသာ Font တွေကို encode ပြုလုပ်ပြီး ပြသနိုင်ဖို့ နိုင်ငံတကာ အဆင့်အတန်းမှီတဲ့အပြင် မြန်မာစာ တစ်မျိုးတည်း မဟုတ်ဘဲ မြန်မာနိုင်ငံတွင်းက တခြား တိုင်းရင်းသား ဘာသာစကားတွေကိုလည်း ပြသနိုင်တဲ့ စနစ်ဖြစ်တယ်လို့လည်း ဆိုပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ Unicode စနစ်ကို ပြောင်းလဲတာကို ကူညီပေးမယ့် Facebook ဟာ New User တွေကို Zawgyi အသုံးပြုခွင့် ပိတ်ထားပြီး လက်ရှိရှိနေတဲ့ အသုံးပြုသူတွေအတွက် Font Converter တွေကို ပိုကောင်းလာအောင် ကြိုးစားနေပါတယ်။ ဒီအပြောင်းအလဲက Post တွေကို ထိခိုက်မှုရှိမှာမဟုတ်ဘဲ Buttons တွေ၊ Help Center က လမ်းညွှန်ချက်တွေနဲ့ Facebook App က Reporting Tools တွေကို မြင်တွေ့ရတဲ့ ပုံစံ မတူညီတာပဲ ဖြစ်မယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
အဲဒါကြောင့် Unicode ကို တရားဝင် ပံ့ပိုးလာတဲ့ Facebook နဲ့၊ Zawgyi ကိုသာ တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် အသုံးပြုနေကြတဲ့ Facebook User တွေမှာ မြန်မာ Facebook User တွေက Unicode ကိုပြောင်းလဲလက်ခံလာကြမှာလား?
Facebook ကို မသုံးတော့ဘဲ တခြား Social Apps တွေကို ပြောင်းလဲ အသုံးပြုကြမှာလား ဆိုတာတော့………………..
သင် ဆိုရင်ရော ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်မှာလဲ?
Myanmar Facebook Users မြားနဲ့ Unicode Font System
Facebook က Myanmar Font အနနေဲ့ Myanmar Unicode ကို တရားဝငျ အသုံးပွုသှားပွီး Zawgyi Font ကို တဖွညျးဖွညျး ဖွုတျခသြှားမှာ ဖွဈတယျ ဆိုတဲ့ သတငျးကို သွဂုတျလ (၁၅) ရကျနကေ့ Facecbook Newsroom မှာ ထုတျပွနျခဲ့ပါတယျ။
မွနျမာနိုငျငံရဲ့ အရေးကိစ်စတှအေတှကျ Facebook ပျေါမှာ သတငျးတုနဲ့ hatespeech တှကေို လြှော့ခဖြို့ ရညျရှယျပွီး သီးသနျ့ product ဖနျတီးဖို့ ကွိုးစားခဲ့ Facebook ဟာ သူတို့ ရရှိလာခဲ့တဲ့ အဖွရှောနညျးကို ဝမြှေခဲ့တာပါ။
မွနျမာနိုငျငံရဲ့ Facebook user တှအေကွားက Facebook ရဲ့ စညျးမဉျြးစညျးကမျးတှနေဲ့ ကိုကျညီမှုမရှိတဲ့ အကွောငျးအရာတှကေို Flag လုပျနိုငျဖို့အတှကျ နညျးပညာအရရော လူအငျအားကိုပါ ရငျးနှီးခဲ့ရာက 2018 ဒုတိယ ၃လပတျမှာ hatespeech အဖွဈ ဖယျရှားခဲ့တဲ့ အကွောငျးအရာတှထေဲက 52% ဟာ ကွိုတငျသိရှိခဲ့တာကွောငျ့လို့ ဆိုပါတယျ။
ဒါ့အပွငျ မကောငျးတဲ့ အကွောငျးအရာတှကေို report လှယျလှယျကူကူ လုပျနိုငျဖို့အတှကျ ကွိုးစားတဲ့ နရောမှာ မွနျမာစာ display ဟာ အကွီးဆုံး အခကျအခဲဖွဈခဲ့ပွီး Unicode ကသာ Font တှကေို encode ပွုလုပျပွီး ပွသနိုငျဖို့ နိုငျငံတကာ အဆငျ့အတနျးမှီတဲ့အပွငျ မွနျမာစာ တဈမြိုးတညျး မဟုတျဘဲ မွနျမာနိုငျငံတှငျးက တခွား တိုငျးရငျးသား ဘာသာစကားတှကေိုလညျး ပွသနိုငျတဲ့ စနဈဖွဈတယျလို့လညျး ဆိုပါတယျ။
မွနျမာနိုငျငံမှာ Unicode စနဈကို ပွောငျးလဲတာကို ကူညီပေးမယျ့ Facebook ဟာ New User တှကေို Zawgyi အသုံးပွုခှငျ့ ပိတျထားပွီး လကျရှိရှိနတေဲ့ အသုံးပွုသူတှအေတှကျ Font Converter တှကေို ပိုကောငျးလာအောငျ ကွိုးစားနပေါတယျ။ ဒီအပွောငျးအလဲက Post တှကေို ထိခိုကျမှုရှိမှာမဟုတျဘဲ Buttons တှေ၊ Help Center က လမျးညှနျခကျြတှနေဲ့ Facebook App က Reporting Tools တှကေို မွငျတှရေ့တဲ့ ပုံစံ မတူညီတာပဲ ဖွဈမယျလို့ ဆိုပါတယျ။
အဲဒါကွောငျ့ Unicode ကို တရားဝငျ ပံ့ပိုးလာတဲ့ Facebook နဲ့၊ Zawgyi ကိုသာ တှငျတှငျကယျြကယျြ အသုံးပွုနကွေတဲ့ Facebook User တှမှော
မွနျမာ Facebook User တှကေ Unicode ကိုပွောငျးလဲလကျခံလာကွမှာလား?Facebook ကို မသုံးတော့ဘဲ တခွား Social Apps တှကေို ပွောငျးလဲ အသုံးပွုကွမှာလား ဆိုတာတော့………………..
သငျ ဆိုရငျရော ဘယျလိုဆုံးဖွတျမှာလဲ?
Tags: Featured Font LocalNews Myanmar News TechNews Technology Unicode Zawgyi